बेवास्ता नगर्नुस्, यस्ता संकेत देखिए ‘ब्लड क्यान्सर’ हुनसक्छ – Sandesh Munch
June 1, 2020 557
एजेन्सी – मानव शरीर कोषिकाहरुले बनेको हुन्छ । जन्मिदा हामी साना थियौँ । कोषिकाहरु बढ्दै गएर हामी ठूलो हुन्छौँ । जिवित प्राणीहरुमा कोषिका बढ्ने क्रम जारी हुन्छ । तर धेरै बढ्नु क्यान्सर हुनु हो ।
यदि ७/८ घण्टा निदाएर उठ्दा पनि थकान र आलस्य महसुस हुन्छ भने चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ । बिना परिश्रम थकान महसुस हुनु ब्लड क्यान्सरको सुरुवाती लक्षण पनि हुनसक्छ । साथै, शरीरमा रगतको कमिले पनि यस्तो हुनसक्छ ।
Prevकोरोना संक्रमितमा देखियो अर्को पनि यस्तो रोग, चिकित्सक चिन्तित
Nextसुष्माकाे ठुलाे बुवा रवि दाईसंग यति धेरै आक्राेशित, ‘नवराज गतिलाे केटाे थिएन्’!!
अमेरिकी कम्पनी मोडर्नाले बाँदरमा प्रयोग गरेको खोपबाट पायो सफलता!
तपाईको आजको राशि*फल